တရုတ်အဘယ်ကြောင့်အဝတ်အစားဟန်ပြတံဆိပ်ခတ်ခံရဖို့ရှိသည်သလဲ? စက်ရုံနဲ့ထုတ်လုပ်သူ | FC အသင်း
အဆိုပါအဝတ်အစားဟန်ပြအဝတ်အစားပြသများအတွက်ကွန်တိန်နာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းများအဓိကအားစသည်တို့ကို disassemble ဖို့စတာတွေလေ့ MDF အဖြစ်လူသိများအလတ်စား fiberboard, fireproof ဘုတ်အဖွဲ့, acrylic ဘုတ်အဖွဲ့, ပွင့်လင်းကျောက်သလင်းဘုတ်အဖွဲ့, လွယ်ကူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ပါဝင်သည်အဆိုပါအရောင်များ, ငွေ, မှုန်သောအနက်ရောင်, ပန်းရောင်, မီးခိုးရောင်နှင့်အခြားအရောင်များကိုရွှေဖြစ်ကြသည်။ အလင်းကိုသေတ္တာများထိပ်ပေါ်ထိပ်, ချောင်းအလင်းအိမ်, မီးထိုးနှင့်ချောင်းသေတ္တာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ မရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့စံဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မြေပြင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. တစ်ဦးစံစတိုင်သို့မဟုတ်အထူး-shaped display ကိုကက်ဘိနက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကက်ဘိနက်ကိုယျခန်ဓာကိုရှေးခယျြနိုငျသညျအဖြစ်ထိုအုတ်ရိုးဆန့်ကျင်နေရာချ Display ရဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏နောက်ကျော panel ကိုတစ်ဦးဒီလိုပါပဲ panel ကဖြစ်ပြီး, တူညီတဲ့အရောင်, အဖြူအရောင်သို့မဟုတ်မှန်မျက်နှာပြင်။
လူတွေကောင်းသောအရည်အသွေး, အမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်, ထူးခြားတဲ့ထူးခြားတဲ့နှင့်ဝတ္ထုအဝတ်အစားတောင်းဆိုသောကြောင့်, အဝတ်အစားကလူရဲ့ဘဝတစ်ဦးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်, ဒါအဝတ်အစားများ၏ရောင်းအားလည်းအလွန်ကြီးအဝတ်အစား display ကိုများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများတစုံတပါးကဲ့သို့, တိုးတက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဝတ်အစားဟန်ပြ၎င်း၏ setting ကိုနှင့်ထင်သာမြင်သာများအတွက်အထူးအရေးကြီးပါသည်။
display ကက်ဘိနက်ထုတ်လုပ်သူအမြင်အာရုံကိုပိုမိုသပ်ရပ်လှပရှာဖွေနေ, ကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်ကိုဟန်ပြဖေါ်ပြခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိကွဲပြားခြားနားသောဟန်ပြဒီဇိုင်း, ယေဘုယျအားဖြင့်သုတ်ဆေးနှင့်အဝတ်အစား display ကိုထိန်သိမ်းသုံးပြီးအထည်ချုပ်ဟန်ပြလုပ်နေပါတယ်။ အဝတ်ဟန်ပြ၏သစ်သားသိပ်သည်းဆ fiberboard ၏ဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်ဆေးသုတ်ဖုတ်ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည်။ အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုတောက်ပပြီးလှပလှပါတယ်။
အထည်ချုပ်ဟန်ပြ၏ထုတ်လုပ်မှုပရိဘောဂ၏အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပစ္စည်းထိုကဲ့သို့သောပြား, သုတ်ဆေး, ကုသအေးဂျင့်များနှင့်ထောင့်အပေါ်ကိုသုံးပင်ဖျံအဖြစ်စံချိန်စံညွှန်းများ, ဖြည့်ဆည်းရပါမည်။ side bars တွေကိုနှင့် screw နှစ်ခုအကောင်းတစ်ဦးဟန်ပြလုပ်စံအရည်အသွေးဖြစ်ရပါမည်။ ဒါဟာအထည်ချုပ်ဟန်ပြဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ထမ်းများဒီဇိုင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြောင်းသေချာစေရန်ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီသတိထားဒီဇိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်သုတေသနထွက်သယ်ဆောင်ရမည်ဟုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတိကျစွာဖြစ်ပြီး, ရှေးခယျြခံရရန်ပစ္စည်းများစျေးကွက်၏အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုနှင့်အညီဖြစ်ရမည်, နှင့်အရည်အသွေးကောင်းသောဖြစ်ရမည်။
ဘဝမှာတော့အသေးစိတ်အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ကျရှုံးဆုံးဖြတ်ရန်, ဒါကြောင့်အဝတ်အစားဟန်ပြ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းအရေးကြီးလှသည်, အသေးစိတျတစျခုလုံးကိုစတိုးဆိုင်အဝတ်အစား၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အောက်ပါသင်တို့နှင့်အတူ၏အရေးပါမှုကိုဝေမျှဖို့ဆွစ်အမှတ်တံဆိပ်၏သေးငယ်တဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် အဝတ်အစားဟန်ပြတံဆိပ်ခတ်ခြင်း။
အဝတ်ဟန်ပြမဖုံးသည်ဆိုပါကတစ်ဦး burr ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ဖောက်သည်ရဲ့အသားအရေမှလျှောနှင့်ပင်အဝတ်အစားများလိုင်းပေါ်မှာဆွဲထားပါလိမ့်မယ်။ အစွန်း banding လှပစုံလင်သောနှစ်ဦးစလုံးသောစက်၏အစွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစွန်း banding များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလျစ်လျူရှုကြပါဘူး။
Post ကိုအချိန်: ဇူလိုင်-23-2019
Optical Shop Decoration, Glass ကို Display ကိုဟန်ပြ , Glass Jewelry Showcase, မိတ်ကပ်လက်လီ Display ကို , Glass ကိုဟန်ပြဝန်ကြီးအဖွဲ့, Cosmetic Shop Counter Design,